Adeegga Qorista Qormada ee Soomaaliya
Adeegga Qorista Qoraalkaaga shaqsiyeed iyada oo aan lacag bixin qarsoon. Ka dalbo Soomaaliya qoraalladeeda caadada ah ee ka soo baxda Ingiriiska iyo Mareykanka. 24/7 Taageero, Dib u eegisyo Bilaash ah iyo shaqooyin tayo sare leh waqti gaaban
Sida Loo Xulo Adeegga Qorista Qormada
Way fududahay inaad ka hesho adeeg qorista maqaalka khadka tooska ah ee ballan qaadaya inuu soo saari doono qormadii ugu fiicneyd ee abid aad qorto. Qaarkood xitaa waxay dammaanad qaadaan badeecadooda 'qumman'. Runtii ma sidaas baa? Haddayse tahay, sidee ku ogaan kartaa inay runti yihiin kuwa ugu fiican, ama haddii uu jiro mid kale oo meesha ka bixi kara oo ka adkaan kara natiijooyinkooda? Maqaalkani wax yar ayuu iftiimin doonaa su’aashan. Waxaan rajeynayaa, in si fiican lagugu wargalin doono si aad uhesho go'aan sifiican loo oggol yahay markaad wax dooraneyso.
Qaar badan oo ka mid ah qorayaasha qormooyinka khadka tooska ah waxay ku andacoodaan inay leeyihiin xalka ugu fiican ee qorista nooc kasta oo qormo ah, gaar ahaan adeegga qorista maqaalka gaarka ah. Laakiin markaa, yaa runtii soo saara qormada saxda ah ee saxda ah? Custom had iyo jeer ma aha kaamil ah. Qorayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay bixiyaan shaqo dhexdhexaad ah. Qorayaasha qaar xitaa wey khayaali karaan qorayaasha kale shaqadooda iyagoon xitaa ogeyn, laakiin aan wajahno, khayaanada oo kaliya ayaa xun.
Hal shay oo aan wada hubin karno, si kastaba ha noqotee, waa in xatooyada aysan ku guuleysan qoraa kasta oo adduunka wax ka qora. Qorayaal fara badan ayaa wali u hoggaansamaya xeerarkii hore ee qorista qorista. Weli waxay raacaan waqtiga kama dambaysta ah, waxay abuuraan oo u soo celiyaan shaqooyinkooda waqtiga loogu talagalay, oo waxay ku bixiyaan lacag-bixinta waqtigooda. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in la iska indhatiro tirada sii kordheysa ee qorayaasha qorista ee jabinaya dhammaan xeerarka. Haddii ay adeegsadaan nidaam 'caadada' ama 'waqtiga-sanduuqa', waxaa iska cad in qorayaasha qormooyinka qaarkood ay wali qish gelinayaan shaqada qorayaasha kale iyaga oo aan ogeyn.
Sideed u kala garan kartaa farqiga u dhexeeya qoraa curis liita iyo adeegga qorista qormada ee internetka oo jaban? Adoo raadinaya qiimo jaban. Haddii qiimaha shirkadda adeegyada qorista qormada ay laba ama saddex jeer ka badan tahay tartankooda, markaa waxaad u baahan kartaa inaad ka fikirto inaad raadiso meel kale. Waxaa laga yaabaa inaad bixiso wax badan, laakiin waxaad heli doontaa adeeg wanaagsan, taasna waa mid aan qiimo lahayn.
Shirkadaha adeegga qorista qormada ee jaban badanaa waxay lahaan doonaan adeeg macmiil oo kayar kuwa ay la tartamayaan, maxaa yeelay waa inay magdhaw ka helaan khibrad la'aantooda. Marka qofku ku qasban yahay inuu shaqadiisa u dhiibo shaqadiisa, kooxda adeegga macaamiisha ee shirkadda waxay u badan tahay inay qayb ka mid ah dhibaatada bixinayaan. Tani waa sababta qiimaha ay muhiim u tahay.
Qoraaga maqaalka gaarka ahi wuxuu ogaan doonaa markuu isagu ama iyadu sameeyo isbedelo ku filan oo ka dhigaya qormada mid istaahila in lagu qoro joornaal, wuxuuna weydiisan doonaa xoogaa dib u eegis bilaash ah. Qoraagu waa inuu sidoo kale helaa macluumaad xiriir oo ku filan si uu ugu fududaado inuu la xiriiro kooxda adeegga macaamiisha. Qorayaasha qormooyinka ugu fiican waxay ku faraxsan yihiin inay si joogto ah u bixiyaan dib-u-eegis bilaash ah, si ay macaamiishooda ugu qancaan.
Adeegga qorista ee ugu fiican waa inuu ahaadaa mid aad u habaysan oo lala socdo dhinac kasta oo habka qorista ah. Qoraa isku dubaridi kara hawsha oo dhan bilow ilaa dhammaad wuxuu soo saari doonaa badeecad dhakhso badan oo saxan. Qorayaasha aan u muuqan karin inay shaqooyinkooda ku dhammeeyaan waqtiga loo qabtay ee loo qabtay waxay u baahan yihiin inay aad uga taxaddaraan. Badanaa waxay gooyaan geesaha iyagoo ku degdegaya, mana sameeyaan isbadal ku filan inta ay socdaan si ay ula kulmaan waqtiga ugu dambeeya. Sidoo kale waa inay lahaadaan xirfado abaabul oo wanaagsan si ay u dejiyaan waqtiga kama dambaysta ah ee qabyo kasta.
Qorayaasha maqaalka ugu fiican ayaa adeegsan doona aalad kasta oo ay awoodaan si ay u qoraan maqaallo caadiya. Hal qalab oo aad waxtar u leh ayaa ah waxa loo yaqaan aaladda dib u eegista. Kani waa barnaamij loo adeegsan karo Microsoft Word, Press, Safari, ama barnaamij kale oo processor word ah. Waxay baari doontaa qoraalkaaga waxayna hubin doontaa khaladaadka. Haddii ay jiraan khaladaad higgaadin ah, waxay ogeysiin doontaa qoraha, ka dibna sameyn doona isbadalada lagama maarmaanka ah si loo saxo qormada. Dib-u-akhrinta waa mid aad muhiim u ah, qorayaasha fahmaya sida loogu isticmaalo aaladdan waxay noqon doonaan kuwa loo aqbalo inay noqdaan tifaftireyaal maqaal xirfadeed.